Posted: Ebla/April 17, 2011 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (20)
Bonn Marathon bara kana irratti Athletoota 11,177 Biyyooti 45 irra kan hirmatan enna ta’u, dowwatoota 200,000 ol ta’utu dow’atee. Kaacha kana kessaatti Matathon 1,583 Maratana Marathona qixxee, 7,100 kan hafan hirmaattota garagaraa akka ta’an Gazexoonni Magaala Bonn addeessaniiru.
Oromtiticha Kaacha Marathon Deutschepost qopheesse Fiqiruu Ajjamaa fi Badhaanee Gammachuu 1ffaa fi 3ffaa ba’uun injifataniiru.
Athletii Badhaanee sagantaa badhaasa irratti Alaaba Biyya Oromoo ol kaasee badhasaa enna fudhaatu warri argee gammachuu guddatu itti dhagayame. Qaamolee mootummaa, Ijaarsotaa garaagaraa fi Dowwatoota 200,000 ol-ta’u kallaattiin agarssiisun, Oromoo, Qabsoo isaa fi Alabaa Oromoo beeksisanii argamuun isaa ajaa’iba ta’ee kan mullate dha.
Badhaane Gammachu Acuuccaa ilmaan oromoo irraa ga’a jiruuf isaa irra qaqqabaneen Boyya Oromoo Lubbu isaa caala jalatuu gadhissee Biyya Jarmanitti Koluu galee nama jiru.
Qaxalee gurbaan kun eenyummaa isaatti kutatee dandeetti/Ogummaa qabuun itti fufee Saba isaa beeksisuu fi Ogummaa isaa cimsuu irratti muratee kan ka’e dha. Ijifannoo Maraaton durii isaa irraa ka’ee ammas Xiqinaanillee iddoo hirmaatanitti Injifannoo agarsisaan Gazeexessitoota fi Uummata Magaala Bonn guyyaa kana argamanii hordofaan rajeeffachiseera/Ajaa’ibseera.
Guyyaa kana Gazeexessota Oduu qopheessuuf kaata turan maddii Oromoonni achitti argaman Alaabaa Oromoo qabatanii Atiletoota Oromoo fi hirmaatota biroo jajjabeessaa turaniru. Injifannoo fi mullinni argamee Oromoo bakka jiru hundatti akka gammachisu beekamaa dha.
Kanaaf, Injifannoo guyyaa kana argamee warrii argamanii ilaalanii fi Subquunnamtii/ Medea addaddaa arguutti carraa argatan qixxee bilisummaan argametti ilaalanii gammadaniiru. Isinis, suuroota kanaan walqabsiifnee ergine kana ilaalati, itti gammadaa. Bakka hundatti, injifannoo ilmaan Oromotiif, haa ta’u!
Waa hundaafu Suraalee guyya kana ilalaame.
RELATED: Celebrate Oromian Athletes
Apr 17, 11 at 5:34 am
It is nice to see and read such kind of linear progression. It is replacing the Ethiopian (colonial) flag by the Oromian (colonised) flag. I hope this breaking news will continue breaking fothcoming Oromo athletics news.
Apr 17, 11 at 5:47 am
This is historical achievement and deed. This has been long overdue and I hope others will follow this miraculous action. The greatest achievement in Ehtiopian athletics history was recorded by our athletes and Oromia should be recognized for producing such talented and gifted world class athletes.
Apr 17, 11 at 8:38 am
yaa saboona namaa baga gammadee saba keelee caala caalattiiti gamachiifte jechoon gamachuu tiyya onnee irraa siif dabarssa.
Dura bula baalchaa
Apr 17, 11 at 9:07 am
— On Sun, 4/17/11, ambo gudar wrote:
Subject: Fw: WG: Fwd: Maraatoon Bonn Injiffanoo Oromotaatin xummurame
Ilmaan Abba Gadaa Nagaan Oromoo isiin waliin haa Jiraatu!!
Obbo Baalchaa fi Abbomaa heeddu Galatooma!!!
Aadaa Oromoo keessatti Kaachaa, utaalchaa, Guluffi Fardaa, Wal’ansoo, Qillee fi Saddeeqa taphachun fa’ii iddo guddaa qabu. Figichaan Ilmaan Oromoof namonni Oromiyaa keessatti dhalatan Aadaa Oromootu isaan gargaree bebbekamoo ta’an, ta’as jiru.
Athletii Badhaaneeniis seenaa Oromoo keessatti Alaaba Oromoo qabatee Badhaasa Fudhachuun isaa duraa natti Fakkata.
Athletoonni Biroos gar fuulduraatti akkanuma otoo itti fuufan.
Galatinni guuddan Sii gawuu Abbomaa Bantii kaata kenya kana nuu dabrsuu keetifi !Kaata ilmaa oromiyaa Badhaanee Gammachuu baga milkooftte, baga moyatte jabadhuu ittii fuufii waaqin gurachii, ayyanni oromoo sii’a jabessu, ilmaan oromiyaa sii duuba yaadhabattani. Maaqa bareeda warra (abbaa fii haatti) maaqa bareeda akanaa sii baasanni atis qabatte ittiin gudachuu keetif anarra ulfinna guudaa jaalalaa cimaa qabdda .kara birattin taatafii gudda gooten adunyaa duratti as baate jabadhuu waaq si’a jabessu.
Kara biratiin alaabaa (faajii,Ruufa) oromiyaa Gurachaa nafa keenyaa ,diimaa dhiiga keenyaa fii foon keenya akasumaas adii lafe kenya kaan bakka keenyaa ( saba guuracha) budhu qabatte dirree saniratti bawuun kee anaf goota ilma oromoo kana jarraa kanatti (21-ffa) baagga dhalatte guudatte ilma sabonnaa oromoo taate muulatte jirdhu korma oromiyaa.siinaan bona waaq galatomii ilma korma kana nuu baasu keetif I am very happy !!
yoo ilmaan arba huundi faajjii kana bifa isaa bakka wooljijjiranni qabatti adunyaratti ittin boonaani nutti akamitti warri hundee fajii kana tane ganna ?tufana ? kuuni waan nama dinqu. waraqissa kaa’ee kanaf Tunizyaanii fii egipty maata dure’aa .yoo waayee waraqssa kaaba afirkatti ka’ee kan wordofttu taanaani fajjii kana akka fakenyatti qabachu qabdda Habasha faajjii (alaabaa) akka fakenyatti qabattuu agartanni ?
Badhanee Gammachuu Viva !!!
Apr 17, 11 at 1:21 pm
Obboleesso baga gammadde! atii sab-bonna oromootii rabbiin bagaa sii gammachiise. jabadhuu. Ayaanii oromoo siin walin jira
Apr 17, 11 at 2:27 pm
Yaa Ilmaa biyya Baga Gammaddee nu-ilee gammachistte.
Kessatu alabaa Oromoo addugnaaaadhaafi muli’suuni kan kee yoomiiyyu
indagattamu seenaa galmesiteertta.
Garu diina keenna arsudhaaf osuu alabaa ABO/OLF ta’ee baayee gaarri ture.
Duraan dursee obboleessa keenna baga gammadde jedheen bakka jirutti dabarsaaf. Itti aansee Oromoon cuftis baga gammaddan isiniin jedha. Kuni isa yeroo jalqabaa osoo hin ta’in fiigichi aadaa oromoo keessaa isa jalqaba. Asirratti irra guddaa ilmaan oromoo kan gammachiise alaabaan oromoo guutuu biyyaa keessatti mirmirfamuudha. Obboleessa keenna omriin isaa haaturu jennaan, ammas hamileen kee of duratti haasocho’u siin jenna jaala keenna. Kunis wanti baratamuu qabu yaa’oromoo yaa barataa, yaa qotee bulaa keenna, yaadaldalaa, fi yaadalagdoota mootummaa biyyaafi biyya alaa jirtan gammachu kanarraa akka qooda fudhattanii ilmaan oromoo kan carraa kana hin argatiniif bira dhaabbattanii akka kunuunsa gootan bakka jirtan cufatti isin gaafadha.
Galatoomaa!!!!!!! Injifannoon yoomillee kan oromooti!!!!!!!!! yoomillee taanaan waanjoo gabrummaa baannee hin hafnu jedha.
Apr 17, 11 at 8:05 pm
Fooliin bilisummaa urgoofte. Fiqiruu Ajaamaa fi Badhaanee Gammachuu baga kaacha/dorgaan-dorgee kanatti hinjifattan. Faajii walaabuu addunyaan wal nuuf barsiiftan. Gaafa bilisummaa Oromiyaa wallin gammaduuf ayyaanni Oromoo nu haa ga’u.
Apr 17, 11 at 8:27 pm
This is Long time coming. This is it my friend. You are my Hero! You are my Idol! I have nothing to say except Thank you!!! hope all will follow your inspiration.
Apr 17, 11 at 9:30 pm
Tokkoffaa: baga gammaddee… nulee gammachistte. Kan bira imoo::: …jarraa irraa jarraatti hawwiin kiyya fi ummata Oromoo…Athletii…biyya isaa fi ummata isaatii yaadu argachuudha. Ummata Oromoo tiif, “Badhaanee Gammachuu” dhufee jira. Athletii…Athletoota bira immoo abdiin egaa jira.
Badhaanee Gammachuu kan dura ta’un hawwii fi yaada ummata maraati. Keessatti immoo abdii… Athletii-ti… Athletootati.
Oromtichaa fi Oromtittiin, sab-boontichaa fi sab boontittiin lafaa ol ka’anii, “Badhaanee Gammachuu….Badhaanee Gammachuu…. Fiqiruu Ajjamaa….Fiqiruu Ajjamaa” jedhaa jiran. Gochaan keessan, ‘Ka’i Qeerroo…Ka’i Qeerroo!’ jedhan… gurra Oromootaa maraa keessaa iyyaa jira.
Har’a Seenaan Barreeffame Jira!!!!!
Apr 18, 11 at 5:54 am
Gooticha oromoo baga gamadee!!
Seenaa galmesstte jirataa itti fuffi. kabajan atti oromoota lammi kee bira qabdu iddoo gudaa dha ulfadhu.
Atileeton Olompikii Adunyaa irratti hirmataan oromoon maqaa biyya Impayera itoopiyyaattin dorgomtan ,seenaa kana akka irradeebtani Oromiyya fi oromoo Adunyaa irratti mulsitan abdii qabna.
Wareen haaftanilee mee seenaa hojadhaa
isa kan kessani maltoo godhadhaa
kabajaa Oromummaa yeroodhan gonfadhaa.
Apr 18, 11 at 9:42 am
Yaa ilma Oromoo baga gammade!!! Injifannoon kee fi sabboonumaan kee hedduu nu boonsa! Oromoon oromummaa keenyaan yoo boonnee fi bilisummaa jabinaan qabsoofne, saba waa hundaa qabuu dha salphaatti uummata keenya maraaf dabarsuu dandeenya.
Isiniin boonna atleetota keenya!
Apr 18, 11 at 6:22 pm
Baay’ee sitti gammanneerra. Injifannoon kan OROMOO ti.
Haaluma kanaan itti fufaa, qacaleewwan oromoo….
Apr 18, 11 at 11:00 pm
Gooticha Oromoo baga gammdee, seenaa kee saboonumma galmeestee!!
Har’a oromoon kalatti hundumman Qabsoo isa fininsaa jira, akka bilisumman tenya yeroo gaabaaba kestti galmma gesu shaki tokkolee hin qabu, maltoo kana mirkanesaan dhugefachaa jira.
Diin Ullee Umata oromoo ittin reeba jiru maqaa ABOttin, kanaaf otuu baka jiru maratti haaga bilisoomnee Alaabaa Oromiyyaa gadi dhabanutti Alaabaa ABO/OLF malatoo keenyaa godhanee diina keenya qaanesinee, irra caalaa kabajja qabsoo bilsummaa oromoofi ABO diin oromoo biratti akka jibamu gochaa jiruuf, umman oromoo ammoo jaalalaa fi kabajaa ABO tif qabu mulsnee irra ijifanno ta’aa
Apr 19, 11 at 2:56 pm
Maqaa Oromootiin Figdee Alaaba Oromoo dha Qabatte argamuun Kee Waan gudda dha gltm baga gamaddee Ilmaan Oromoo Adunyaa Irra faca’anii Jiraan Kaan Waan kana argaan Akka gammachuun isaan Keessattii argamuu Godhun Kee Injifanoo Gudda dha akkasumas Oromoo Adunyaa Irrattii Beksisftee Hedduu gltm sinjedha ,
Apr 24, 11 at 12:25 am
Apr 24, 11 at 12:30 am
Ateetoota Oromoo ka hanga arraa adunyaarratti maqaa Itiophiyaatiin adunyaarratti beekkamanirraa ati KAN OROMUMMAAN FI OROMIYAA dhaadatee 100% caala viva jabaadhu.
Apr 24, 11 at 12:36 am
Viva yaa sabboonaa!!! Atletoota Oromoo kan hanga arraa meqaa Itiophiyaatiin adunyarratti beekkamanirraa ati hark 100% callta. Oromiyaa fi Oromuummaan dhaadachuu keetiif! Oromuummaa keetiin boonuun kee Oromoota mara boonsa jabaadhu!!!
Apr 24, 11 at 7:50 pm
it is amezing story down of habsha colonializm and highway for oromian frrdom.
Apr 25, 11 at 8:08 pm
Siriidha ati kanjalqaaba tadhuu hindiidu. Atiletoota kenyaa warra alaabaa abaashaa ufataanii figaaniif barumsaa hintadhaa jedheen yaada.